Sidee loo dhisaa istaraatiijiga mashaariicda guuleysta sida Brian Dean, abuuraha SEO ee Backlinko?
Sida ku xusan xeerarka dejinta mira dhalinta dhamaan ilaha webka, gaar ahaan bartilmaameedka, waxay u baahan yihiin inay si joogto ah u soo saaraan content. Si kastaba ha noqotee, maxay tahay xaddiga caadiga ah ee daabacaadda content? Xaqiiq ahaan, ma jirto fikrad noocaas ah oo ah heer caadi ah ama midka ugu fiican, sababtoo ah wax walba waxay ku xiran yihiin boggaaga, ujeedooyinka ganacsiga,. Dabcan, waxay kuu fiicnaan kartaa inaad ku daabacdo nuxurka waqti kasta oo aad haysatid wax aad la wadaagto dadweynaha. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay inaad u diyaargarowdo in kiiskanaga aanad ku qanacsaneyn oo aad si deg-deg ah u dhammaato.
Qodobkan waxaan kugula wadaagi doonaa fekerkayga mawduucan oo caddeynaya sababta "waxoogaa ka sii badan" istaraatiijiyada mawduucani waxay u wanaagsan tahay horumarinta ganacsigaaga.
Waxaad heli kartaa waxyaabo badan oo jecel iyo saamiyo, helitaano badan oo soo galaya oo soo jiidanaya taraafikada la beegsado oo dheeraad ah oo hirgelinaya "habaabin ka yar". Brian Dean, milkiilaha SEO ee "Backlinko SEO", wuxuu ku darsaday istaraatijiyad udubdhexaad u ah saameyn weyn. Wuxuu daabacay xaddidan xaddidan qoraallada SEO dhawrkii sano ee la soo dhaafay. Dhamaan xarumahaasi waxay kufaraxsadeen baabuur badan oo bartilmaameed u ah goobta uu ka sameeyay waxayna ka dhigeen mid ka mid ah ilaha ugu muhiimsan webka. Qaar ka mid ah qoraalladiisa ayaa u qalmeen 3 kun oo saamil ah iyo in ka badan laba boqol oo xiriir oo jimicsi ah oo ka yimid ilo haboon iyo kuwo rasmi ah. Marka, sida aad arki karto, Mulkiilaha SEO ee Backlinko wuxuu si guul leh u hirgeliyey "wax yar ka sii yar" habka content. Istaraatiijiga Miisaaniyadda
"Qodobbadu waa wax ka badan" istaraatiijiyada content waxay u baahan tahay oo keliya qoraallo ku salaysan cilmi-baaris oo tayo sare leh. Waxaad ubaahan tahay inaad ku biirto dadka isticmaala noocaan oo ah nooca noocan oo kale ah oo taxadarkooda sii wad ilaa inta daabacaadda soo socota. Waxay kuu sahleysaa inaad dhisto dhagaystayaal adoo muujinaya khibraddaada iyo sumcaddaada.
Istaraatajiyad tayo sare leh, oo ka kooban cilmi baaris;
Waxyaabaha la soo sheegay;
Faahfaahin dhamaystiran oo ay ka mid yihiin daaweynta;
Qoraallada qaabka hore;
Qoraallada cilmibaarista ku salaysan;
In xooga la saaro kordhinta iyo dhiirigelinta.
"Faa'idadu waa ka badan tahay" istaraatiijiyadu waxay ku habboon yihiin kuwa websaydhka ah ee sameeya odhaah ah tayada content ee ay daabacaan halkii ay ka ahayd tirada. Cilmi-baarista iyo abuurista tayo sare leh bil kasta waxay qaadan kartaa wakhti iyo dadaal badan marka la daabaco dhawr boosto toddobaadkii.
Habkani kuma habboona dhammaan ilaha webka. Tusaale ahaan, macno maaha in la isticmaalo madadaalo ama barta waxbarashada ama warbaahinta bulshada sida mashaariicdani u baahan yihiin daabacaadyo badan.
Sida aan horay u soo sheegnay tusaalaha ugu fiican ee "ka yar yahay wax badan" istaraatejiyad faahfaahsan waa daabacaadda Brian Dean at Backlinko SEO website. Waxa uu soo saaraa qoraallo uu ku saleysan cilmi-baaris ku salaysan oo la tixraacayo 4-kii asbuuc ama wixii kale. Si kastaba ha ahaatee, inkastoo ay daabacaaddani ku dhufanayso, dadka isticmaala waxay rajeynayaan in uu maqaalo cusub.
Tirakoobka ayaa muujinaya in qaabka daabacaadda Brian Dean uu yahay mid natiijadeedu tahay natiijada celceliska dhexdhexaadka ah iyo dhexdhexaadinta dhammaan qaybaha 53da waa kuwo aad u sarreeya. Celceliska tirada saamiyada waa 2,490, dhexdhexaadiyana waa 1,280. Tirada celceliska naadiyada xidhiidhka ee gaarka ah sidoo kale waa la yaab leh - 275 boostada iyo 175 keli bartamaha. Dhammaan xarumaha ku yaala kakooban ayaa soo jiitay ku dhawaad ​​4 milyan oo booqasho iyo 11 milyan oo bog ah. Waxay muujinaysaa sida habka akhbaarta ah ee ololaha suuq-geynta looga dhigi karo mid aad u baddali kara jaangooyooyinka shabakada iyo kor u qaadida maamulka shabakada suuqa Source .